Créatures socioeconomiques | Reef Resilience
Famantarana sy fiheverana ny lafiny sosialy, kolontsaina, toekarena ary ny fitantanana ny tanàna amoron-dranomasina amin'ny famolavolana sy ny fitantanana.
Ny fiheverana ara-tsosialy sy ara-toekarena dia tokony hodinihina rehefa mamolavola sy mitantana tambajotra MPA na MPA maharitra. Ny famoronana tambajotra MPA manana tanjona ara-tsosialy sy ara-toekarena sy biofizika dia afaka manampy amin'ny fifindrana avy amin'ny fitantanana sehatra tokana mankany amin'ny fomba fijery feno kokoa, ao anatin'izany ny fifandraisan'ny olombelona sy ny tontolo iainana, ary ny fiantraikany mitambatra. Ity fomba fiasa marobe ity dia afaka mamorona fototra izay manova ny fomba iatrehan'ny olona ny fifandirana eo amin'ny tontolo iainana sy ny toekarena.
Fiara sambo mpanjono mpanao asa tanana any Cousin Island, Seychelles. Sary © Jason Houston
Ireo fiheverana ara-tsosialy hodinihina ao amin'ny rafitry ny MPA
Fanekena ara-tsosialy (na manohana ny MPA ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana)
Fialam-boly (fari-pitsaboana izay azo ampiasaina amin'ny fialam-boly)
Fanabeazana sy fikarohana
Kolontsaina (soatoavina ara-pivavahana, ara-tantara, ara-kolotsaina misy tranokala
Ny fifandonana mahaliana (ny fiantraikany amin'ny fiarovana ny hetsiky ny mponina eo an-toerana, sns.)
Ireo fotodrafitrasa ara-toekarena tokony hodinihina ao amin'ny rafitra MPA
Tombontsoa ara-toekarena (fiarovana amin'ny fiantraikany amin'ny toekarena eo an-toerana)
Zava-dehibe ho an'ny mpanjono (marobe ireo mpanjono miankina aminy sy ny haben'ny vokatra)
Ny maha-zava-dehibe ny karazana (ny habetsaky ny karazan-karena ara-barotra sasany miankina amin'ny faritra)
Araho ny fizarana ny vola sy ny tombontsoa avy amin'ny MPA eo anivon'ny vondrom-piarahamonina. ref
Manangana faritra sy fitsipika hiantohana fa afaka mitazona trondro maharitra ny vondrom-piarahamonina ary mandray sakafo, fidiram-bola ary tombontsoa hafa avy amin'ny MPA.
Ampidiro ny vondrom-piarahamonina amin'ny fanapahan-kevitra ary ho azo antoka fa ny MPA dia mifanaraka amin'ny filàn'ny vondrona samihafa samihafa (fikambanan-jiolahy, antokon'olom-behivavy, sns). Ny ezaka toy izany dia hampitombo ny fanarahan-dalàna ny lalàna sy ny fanohanan'ny fiarahamonina ny MPA.
Raha azo atao, dia diniho sy ovaina ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaotolotra ecosystemmanokatra fisie PDF ny faritra.
Arahabaina ny fifandanjana eo amin'ny fampiasana ny fitrandrahana sy ny fiarovana (ohatra, eo amin'ny fanangonana maharitra sy ny haran-dranomasina mahasoa ho an'ny zavamananaina sy ny tanjona fizahan-tany).